ဖျာပုံမြို့နယ်၌ အမျိုးသမီးငယ် (၂) ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကလေးထိန်းရမည်ပြောဆိုကာ တရုတ်အမျိုးသား ထံရောင်းစားခဲ့သူ (၂) ဦး ထောင်ဒဏ်နှစ် (၂၀) နှင့် ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ် ချမှတ်ခံရ - People Media Myanmar
Home ဖျာပုံမြို့နယ်၌ အမျိုးသမီးငယ် (၂) ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကလေးထိန်းရမည်ပြောဆိုကာ တရုတ်အမျိုးသား ထံရောင်းစားခဲ့သူ (၂) ဦး ထောင်ဒဏ်နှစ် (၂၀) နှင့် ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ် ချမှတ်ခံရ
ဖျာပုံမြို့နယ်၌ အမျိုးသမီးငယ် (၂) ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကလေးထိန်းရမည်ပြောဆိုကာ တရုတ်အမျိုးသား ထံရောင်းစားခဲ့သူ (၂) ဦး ထောင်ဒဏ်နှစ် (၂၀) နှင့် ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ် ချမှတ်ခံရ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အမျိုးသမီးငယ် (၂) ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကလေး ထိန်းရမည်ပြောဆိုကာ တရုတ်အမျိုးသားထံ ရောင်းစားခဲ့သူ (၂) ဦးကို ထောင်ဒဏ် (၂၀) နှစ်နှင့် ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ် အသီးသီးချမှတ်လိုက်ကြောင်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံမြို့နယ်၊ ကုလားထိပ်ကျေးရွာနေ မြတ်ကိုနှင့် သိန်းဦးတို့က ဖျာပုံမြို့နေ မ….(၁၈)နှင့် မ….(၂၀)နှစ်တို့ကို တရုတ်နိုင်ငံတင် ကလေးထိန်းသည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါက တစ်လလျှင် ငွေ ကျပ် တစ်သိန်းရရှိမည်ဟု ပြောဆိုစည်းရုံး၍ တရုတ်အမျိုးသားထံ ပို့ဆောင်ရောင်းစားခဲ့ပြီး ငွေကြေးအကျိုး အမြတ်များ ရယူခဲ့သဖြင့် ဖျာပုံမြို့နယ် ဒေါ်ညိမ်းနယ်မြေရဲစခန်း (ပ) ၁၄၂/ ၂၀၁၉၊ (ပ) ၁၅၇/ ၂၀၁၉၊ လူကုန် ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၄/ ၃၂ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ပြီး တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့ရာ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နေ့တွင် တရားခံမြတ်ကိုအား အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ်စီဖြင့် ပေါင်း နှစ်(၂၀)၊ တရားခံ သိန်းဦးကို လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၄/ ၃၂ အရ အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ် ကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြာပုံမွို့နယျ၌ အမြိုးသမီးငယျ (၂) ဦးအား တရုတျနိုငျငံတှငျ ကလေးထိနျးရမညျပွောဆိုကာ တရုတျအမြိုးသား ထံရောငျးစားခဲ့သူ (၂) ဦး ထောငျဒဏျနှဈ (၂၀) နှင့ျ ထောငျဒဏျ (၁၀) နှဈ ခမြှတျခံရ
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ဖြာပုံမွို့နယျတှငျ နထေိုငျသည့ျ အမြိုးသမီးငယျ (၂) ဦးအား တရုတျနိုငျငံတှငျ ကလေး ထိနျးရမညျပွောဆိုကာ တရုတျအမြိုးသားထံ ရောငျးစားခဲ့သူ (၂) ဦးကို ထောငျဒဏျ (၂၀) နှဈနှင့ျ ထောငျဒဏျ (၁၀) နှဈ အသီးသီးခမြှတျလိုကျကွောငျး လူကုနျကူးမှုတားဆီးနှိမျနှငျးရေးရဲတပျဖှဲ့မှ သိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ဖြာပုံမွို့နယျ၊ ကုလားထိပျကြေးရှာနေ မွတျကိုနှင့ျ သိနျးဦးတို့က ဖြာပုံမွို့နေ မ….(၁၈)နှင့ျ မ….(၂၀)နှဈတို့ကို တရုတျနိုငျငံတငျ ကလေးထိနျးသည့ျအလုပျလုပျကိုငျပါက တဈလလြှငျ ငှေ ကပြျ တဈသိနျးရရှိမညျဟု ပွောဆိုစညျးရုံး၍ တရုတျအမြိုးသားထံ ပို့ဆောငျရောငျးစားခဲ့ပွီး ငှကွေေးအကြိုး အမွတျမြား ရယူခဲ့သဖွင့ျ ဖြာပုံမွို့နယျ ဒေါျညိမျးနယျမွရေဲစခနျး (ပ) ၁၄၂/ ၂၀၁၉၊ (ပ) ၁၅၇/ ၂၀၁၉၊ လူကုနျ ကူးမှု တားဆီးကာကှယျရေးဥပဒပေုဒျမ ၂၄/ ၃၂ တို့ဖွင့ျ အမှုဖှင့ျလှဈပွီး တရားစှဲဆိုခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ယငျးကဲ့သို့ တရားစှဲဆိုတငျပို့ခဲ့ရာ ဇနျနဝါရီ ၅ ရကျနေ့တှငျ တရားခံမွတျကိုအား အလုပျနှင့ျ ထောငျဒဏျ (၁၀) နှဈစီဖွင့ျ ပေါငျး နှဈ(၂၀)၊ တရားခံ သိနျးဦးကို လူကုနျကူးမှုတားဆီးကာကှယျရေးဥပဒပေုဒျမ ၂၄/ ၃၂ အရ အလုပျနှင့ျ ထောငျဒဏျ (၁၀) နှဈ ကခြံစရေနျ အမိန့ျခမြှတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
« ယူကရိန်းအရေးတွင် ဗြိတိန်ကို လျှော့မတွက်ရန် ရုရှားကို ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသတိပေး
ပုသိမ်မြို့၌ မီးသတ်ယာဉ် (၁၁) စီး ပေးအပ်ပွဲနှင့် မီးသတ်လေ့ကျင့်ရေးစင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ »